Badda - AOOD Technology Limited
Codsiga baddu wuxuu leeyahay shuruudo xad -dhaaf ah oo ah siddooyinkii silsiladda sababta oo ah bay'addeeda badda ee qallafsan. Waayo-aragnimada ballaaran ee AOOD ee mashaariicda badda iyo hal-abuurnimada joogtada ah waxay hubisaa in AOOD siddooyinku ay dabooli karaan shuruudaha gudbinta ee sii kordhaya ee macaamiisha. Soodhadhka silsiladda AOOD waxay hawshooda ku fulinayaan baabuurta biyaha hoostooda mara, nidaamyada anteenada dayax -gacmeedka badaha, winches -ka badda, aaladaha sonar, qalabka sahaminta seismic iyo badda.
Baabuurta meel fog laga maamulo (ROVs) iyo nidaamyada isgaarsiinta dayax-gacmeedka oo ah laba isticmaale oo muhiim u ah dhammaadka giraanta silsiladda ee codsiga badda waxay had iyo jeer yihiin AOOD furaha horumarinta. Isticmaalka sii kordhaya ee robots -ka biyaha hoostooda ee warshadaha saliidda iyo gaaska ayaa kor u qaadaya horumarinta nidaamyada giraanta silsiladda ee ROV. Sinsiyada siibitaanka ee loo adeegsado biyaha qoto dheer waa inay u adkaystaan ​​bay'adaha biyaha hoostooda sida cadaadiska iyo naxdinta iyo daxalka. AOOD waxay soo bandhigtay kumanaan siddooyin silsilad ah oo loogu talagalay ROV-yada oo ay ku jiraan kanaal keliya ama laba jibbaar oo siddooyin silsilad koronto-optic ah oo loogu talagalay Ethernet ama calaamadaha fiber optic-ga iyo siddooyinkii silsiladda korantada ee qeexidda sare. Wareegyadan sibidhka ah dhammaantood waxaa loogu talagalay magdhow cadaadis, oo lagu shaabadeeyey IP66 ama IP68, guryo bir ah oo bir-bir ah oo adag oo loogu talagalay ka-hortagga daxalka iyo deegaanka biyaha hoostooda.
Nidaamka isgaarsiinta anteenada dayax -gacmeedka ayaa si otomaatig ah u aqoonsan kara, u helaya, ulana socon kara calaamadaha dayax -gacmeedka, waxay muhiim u tahay isgaarsiinta badda laga soo bilaabo bartilmaameedka ilaa meesha la socodka fog. Waxay ka kooban tahay saddex waxyaalood oo muhiim ah - fiilada RF, isku xiraha RF iyo anteeno.
Anteenada ayaa ah qodobka ugu horreeya ee nidaamka gelinta nidaamka helitaanka signalada bilaa -waayirka ah, sababta oo ah nidaamka anteenada ayaa awood u siineysa laba isgaarsiin oo u dhexeeya dhulka iyo saldhig kale oo dhaqso u socda, ka dibna dadku waxay raadin karaan raadaarka, diyaaradda, faanka iyo ka -dhaqaaqista baabuurta ee ka socota xarunta kormeerka. Maaddaama nidaamka anteenada ay tahay in lagu kaxeeyo 360 ° toosan ama leexasho toosan, sidaa darteed waxay u baahan tahay giraan silig si loogu daro nidaamka anteenada si loo xaliyo korantada iyo xakamaynta signalada hal qayb oo taagan ilaa qaybta rotor. AOOD kala -goysyada is -beddelka koxial iyo isku -darka isku -dhafan ee koaxial iyo giraanta silsiladda korantada ayaa la bixin karaa.
Alaabooyinka la xiriira: Siddo simbiriirixan badda